ကလေးစစ်သား ပြန်လွှတ်မှု ကုလ ကြိုဆို
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အမှတ် (၁) စစ်ကြောရေးနှင့် တည်းခိုရေးစခန်းတွင် ကလေးစစ်သားများအား မိဘ အုပ်ထိန်းသူထံ ပြန်လည် အပ်နှံသည့် အခမ်းအနား ကျင်းပနေစဉ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွင်းက ကလေးသူငယ်နဲ့ လူငယ် ၄၂ ဦးကို နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ် ကုလသမဂ္ဂက ကြိုဆိုလိုက်ပြီး၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်က တိုင်းပြည် လွတ်ကင်းလာနေချိန်မှာ နောက်ထပ်ကျန်နေသေးတဲ့ ကလေးစစ်သားတွေအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တိုက် တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အခုအခါ မြန်မာစစ်တပ်က ကလေးစစ်သား စုဆောင်းနေတာတွေ လျော့နည်းသွားပြီဖြစ်ပေမယ့် လုံးဝပပျောက်သွားတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂ ကြေညာချက်တစ်စောင်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ Ashok Nugam ကလည်း ပြန်လွတ်လာတဲ့ ကလေးစစ်သား ၄၂ ယောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေ အတွက် မိမိတို့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွင်မိပါတယ်၊ နောက် ထပ်ကလေးအများအပြား ပြန်လွတ်ဖို့လည်း ကြိုးစား ရပါဦးမယ်လို့ ပြောကြားပါတယ်။
အခု ပြန်လွတ်လာသူ ၄၂ ယောက်ထဲက ၃၄ ယောက်ဟာ အသက် ၁၈ နှစ်၊ ကျန်လူငယ် ၈ ယောက်က စစ်တပ်ထဲအသွင်းခံခဲ့ရစဉ်က အရွယ်မရောက်သေးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ သဘောတူညီချက်အရ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ကလေးစစ်သား ၄၂ ယောက် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ နောက်ထပ် ၂၄ ယောက် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စစ်တပ်ထဲမှာ ကလေးစစ်သားအရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ အတိအကျမသိရပေမဲ့၊ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်ကစပြီး အခုထိစစ်တပ်က ပြန်လွှတ်ခဲ့တဲ့ ကလေးစစ်သား စုစုပေါင်း ၅၂ဝ ကျော်ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့(ယူနီဆက်)က ပြောပါတယ်။
ကလေးစစ်သား က်ိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်စန်းစန်းတင် က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
သို. လေတပ်ဗိုလ် ရေ.. ခင်ဗျားက တော်တော်ရီ ရတဲ့ သတ္တဝါ ဘဲဗျာ။ ခင်ဗျားရဲ့ တွေးခေါ်မှု.က လေတပ်ဗိုလ် နဲ. မတူအောင် ဆန်.ကျင်ဖက် ဖြစ်နေတယ်။
Jul 13, 2013 07:23 PM
နေရပ်- က-ကကြီး (ကျိုက်ကော်)
အမည်မဖေါ်လိုသူ သို့ .. ကျုပ်ပြောဖို့ ကျန်နေသေးတယ်ဗျ။ ဒီကလေးတွေ တနေ့ ကြီးလာလို့ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုပါတော့။ ဟော.. စွမ်းအားရှင်တွေက ဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်ဖို့ ပြေးလာရော.. (၀ူး .. ယား .. ရှား .. မည်သို့ပြုလိုက်သည်မသိ .. )ခင်ဗျား ဘာသာပြန် ရှောင်လင်သိုင်းဝတ္ထုတွေ ဖတ်ဖူးတယ် ဟုတ်။ ဟဲဟဲ ။ ဒါ ကျုပ်တို့ train ပေးလိုက်တာဗျ။
Jul 12, 2013 01:09 AM
သို. လေတပ်ဗိုလ် ရေ.. “စစ်မှုထမ်း”ဖူးနေတော့ တနေ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ၀င်အရွေးခံ လို.ရတာနဲ. မင်းတို.ကို ကျေးဇူးတင်နေရမှာလား?? အပြစ်မဲ့ ကလေးတွေကို ဖမ်းဆီး ပေါ်တာဆွဲပြီး မိဘမဲ့ ဖြစ်အောင် သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ လုပ်တာ၊ ခင်ဗျားတို. သားသမီးတွေ အဲ့လို အလုပ်ခံ ရမှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်မှာ။ စစ်ပညာ တတ်ပြီး အတန်းပညာမဲ့တဲ့ စကားတွေနဲ. ကလေးတွေရဲ. အနာဂတ်ကို မငြိုနွှမ်း စေပါနဲ.။
Jul 11, 2013 09:54 PM
ဘာမှ မသိပဲနဲ့ “ကလေးစစ်သား ၊ ကလေးစစ်သား“ ဆိုပြီး အော် ၊ အော် မနေကြပါနဲ့။ ခုဆို ဒီကလေးတွေဟာ “စစ်မှုထမ်း”ဖူးနေတော့ တနေ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ၀င်အရွေးခံလို့ ရသွားပါပြီ။ မိဘများက တပ်မတော်ရဲ့စေတနာကို အပြည့်အ၀ နားလည်ကြပါ။
Jul 10, 2013 04:46 PM
အ​စ​က​ က​လေး​စစ်သား​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး​ အ​တန်​တန်ြငင်း​နေ​တာ​ အ​ခု​ ဘယ်​သူ့​သ​တငျး​အ​မရနျ​လဲ​ဆို​တာ​ လူ​တိုငျး​မကျြ​၀ါးထငျ​ထငျ​သိ​ရ္လပီ​ဟု​ထငျ​ပါ​သညျ။​
Jul 09, 2013 09:07 PM